UKUKHALA: UMartin Vrijland
Upapa uFrancis, i-Jesuit Saint Nicholas ngaphandle kwentshebe enamathele, usekela-Yesu Krestu emhlabeni, wabiza i-2 zonke iinkokeli zehlabathi kwiveki ephelileyo ukuba eze eVatican kwi14 ngoMeyi 2020 'ngeP Global Global Proact (isivumelwano sehlabathi). Zimbini izinto ezibalulekileyo kwi-ajenda yale ntlanganiso apho wonke umntu kufuneka eze. Eyokuqala […]
UDavid Sinclair ngunjingalwazi wemfuza, iBlavatnik Institute kunye nomphathi wecandelo Paul Paul Glenn Centre for Biological Mechanisms of Aging at Harvard Medical School. Kwinkcazo engezantsi, ucacisa indlela inkqubo yokwaluphala yomzimba womntu inento yokwenza ikakhulu nelahleko yolwazi; ziyafana ne- […]
Kufakwe kuyo UKUBHALA, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	30 Julayi 2019	• 14 Comments
Ukuba sifunda yonke imiqondiso yezi zinto, oko sikubona ngokukhawuleza ukuba umhlaba uguquka ngokukhawuleza kwaye loo mntu 2.0 uyinyani ngaphakathi ngoku kunye ne-10 iminyaka. Siza kubona amava omhlaba kunye nendalo 2.0 (kunye nezinye iinguqulelo ezininzi) ezijikeleze i-2045. Kungoko isimboli yomnyama kwindawo yonke []
Ukusuka kwi-Rutger Hauer's Fruit yaseTurkey ukuya kwi-Gay Pride kunye nomthendeleko weMilkshake
Kufakwe kuyo UKUBHALA, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Julayi 2019	• 5 Comments
Ndibuzwe izolo ukuba ndibone iifilimu zikaRutger Hauer. Ngokutsho kombhali, ezo yayizifilimu ezothusayo. Isiqhamo saseTurkey ngenxa yokuba saphula i-taboos zesondo kwaye enye ifilimu yayilungile. Andikaze ndizibone zombini iifilimu, kuba ndinalo uhlobo lokungahloneli kwendalo kwii-hypes, kodwa ngokuqinisekileyo ndiyazi […]
Kalokunje siye safikelela kwisigqibo sokuba abaninzi abasondelene nathi basenokungafihli (bona le nqaku), ndikucela ukuba uphinde ucinge ngale ngxelo. Andiyithethi 'ngendlela yokuthetha' okanye 'ngeengqungquthela', akukho nto ndiyithetha ngokungekho nto. "Yiya uye wanda" isitatimende esaziwayo [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.440.254